FISAKO Northrop B-2A Fanahy AlphaSim FSX & P3D
Northrop B-2A Fanahy AlphaSim FSX & P3D HOT
The Northrop Grumman B-2 Spirit (fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe Stealth Bomber) dia mpandrafitra baomba amerikanina, misy teknolojia miafina kely azo jerena natao hamakivakiana fiarovana mahery vaika manohitra fiaramanidina; Izy io dia mahay mametaka fitaovam-piadiana mahazatra sy niokleary. Ny ekipa baomba dia manana ekipa roa ary afaka milatsaka hatramin'ny valo alina valopolo kilao (500 kg) -baboaka tarihin'i JDAM GPS, na baomba nokleary B230 2,400 kg (1,100 kg) B83. Ny B-2 no hany fiaramanidina afaka mitondra fitaovam-piadiana mahery vaika eny ambonin'ny habaka amin'ny fikirakirana mangingina.
Ny fampandrosoana dia natomboka tamin'ny tetik'asa "Advanced Technology Bomber" (ATB) nandritra ny fitondran'i Carter, ary ny fahombiazany dia iray amin'ireo antony nanafoanana ny B-1 Lancer. Nitohy ny ATB nandritra ny fitantanan'i Reagan, fa ny ahiahy amin'ny fahatarana amin'ny fampidirana azy io dia nanjary namerina ny programa B-1 ihany koa. Niakatra ny vidin'ny programa nandritra ny fampandrosoana. Namboarina sy novokarin'i Northrop Grumman miaraka amin'ny fanampiana avy amin'ny Boeing, ny saran'ny fiaramanidina tsirairay dia mitentina 737 tapitrisa dolara amerikana (tamin'ny 1997 dolara). Ny vola lany amin'ny fividianana trano rehetra dia mitentina $ 929 tapitrisa isaky ny fiaramanidina, izay misy kojakoja, fitaovana, famerenana amin'ny laoniny ary fanohanan'ny rindrambaiko. Ny saran'ny fandaharam-pianarana ao anatin'izany ny fampandrosoana, ny injeniera ary ny fanandramana, dia $ 2.1 miliara isaky ny fiaramanidina tamin'ny 1997.
Downloads 45 014